Umlutha woononophala uqala nini? - I-Foundation Reward
Ikhaya Umlutha woononophala uqala nini?
UGary Wilson ubuza umbuzo ocacileyo malunga neziyobisi ezingamanyala: "Yimalini kakhulu?" kwi yourbrainonporn.com iwebhusayithi. Uyaphawula ukuba lo mbuzo uthatha ukuba iimpembelelo zoononophala zincinci. Oko kukuthi, awunangxaki, okanye ungumlutha we-porn. Nangona kunjalo, utshintsho olwenziwa ngoononophelo olwenziwe ngoonobumba lwenzeka kwibala. Azinakubekwa nje njengamnyama nomhlophe. Akunjalo nje / okanye. Ukubuza apho umntu awela khona umgca uyayihoya imigaqo ye-neuroplasticity. Ingqondo ihlala ifunda, itshintsha kwaye ihlengahlengisa ukuphendula imeko-bume.
Uphando lubonisa ukuba nangona isantya esincinci se-stimulation singashintsha ngokukhawuleza ingqondo kwaye sitshintshe ukuziphatha.
Ngokomzekelo, kuthatha iintsuku ze-5 kuphela ukukhuthaza ukuphazamiseka okuphawulekayo kwimidlalo yevidiyo kubantu abadala abasempilweni. Abadlala umdlalo babengengomakhoboka, kodwa umsebenzi ophakamileyo wobuchopho uhambelana neminqweno yabo yokudlala. Kwenye lokulinga, phantse zonke iigundane zinikezwe ukufikelela okungathintelwanga "kukutya okutyela" okuselwa kukutyeba kakhulu. Kuthathe kuphela iintsuku ezimbalwa zokutya ukutya okungenamsoco ukuze iigundane ze-dopamine receptors ziyekwe. Oku kunciphise ukoneliseka kwabo kukutya. Ukwaneliseka okuncinci kwaqhuba iigundane ukuba zizinkcinkce nangaphezulu.
Ngokuphathelele i-intanethi ye-intanethi, oku Isifundo saseJamani evela kwi-Max Planck Institute ehloniphekileyo yabheka amadoda ayenomlinganiselo ongaphantsi koononophala. Ufumene utshintsho olunzulu olumalunga nomlutha. Ukugqithisa okugqithisileyo, ukuhlanganiswa okungaphantsi komsebenzi bekukhona phakathi kwengcinga kunye neengqondo zengqondo. Ngaloo nto kwakukho ukuchukumiseka kwengqondo engaphantsi koononophelo, ukugqithisa okungaphezulu koonobumba. Lo ngumqondiso weklasi wokwenyuswa kwexesha xa umntu esetyenziswe kwizinga elithile lokuvuselela. Ngexesha elide badinga izinto ezininzi ezityhaphazayo okanye ezinzima ukuba zivuke.
An Sifundo saseNtaliyane ifumene ukuba i-16% yabasetyhini abaphakamileyo abaqhelisela iiduna ezingaphezu kweyodwa ngeveki bafumana isifiso esingaqhelekanga sesini. Thelekisa ukuba ku-0% yabasebenzisi abangabononisi abavakalisa isifiso sesini esifanelekileyo.
Iingxaki ngaphandle komlutha
Ukutshatyalaliswa kukuba loo mzabalazo ayiyidingi ukuba inguqu ebalulekileyo inguqu okanye imiphumo emibi.
Ukubeka ngokucacileyo, isimo sengqondo sesondo, ukukhathazeka, ukuchithwa kwempahla kunye nezinye iinguqu zengqondo ezinxulumene noxilongo, zenzeka kwibala. Kwakhona uqaphele ukuba iingqondo zethu zihlala zifunda kwaye zivumelanisa nokusingqongileyo. I-intanethi ye-intanethi ivuselela kakhulu. Ijolise kwiisistim zakho zezesondo ezingaqhelekanga, zibophe ubuchopho kwaye ziguqule ukuqonda.
Ukuba ufuna ukuphanda uphando kwiinqhagamshelo phakathi kokusetyenziswa koonobumba kunye nokuxhalaba kwentlalo, nqakraza Apha. Oku kukuthatha kwisiza sangaphandle kwaye kuvule iwindow entsha.
I-Foundation Foundation ayinikeli unyango.
Ukufumana Uncedo >>